Sheeko ku dhacday lamaane Soomaaliyeed . - jornalizem
Sheeko ku dhacday lamaane Soomaaliyeed .
Intii uu barnaamijka socday ayaa waxaa maqlay dhalinyaro fara badan oo oraneysa; "Gabadha Kariima ah aad bay u qurxoon tahay ee waa inaan gacanta ku dhignaa"
Durbaba waxa aniguna go'aansaday in aan gacanta ku dhigo oo aan kaga hormaro wiilashaasi. Nasiib wanaag sidii ayaa dhacday. Kariima waxaa isku baranay barnaamikaasi oo uu soo qaban qaabiyay fasalkayga. Waxa aan Kariima ka qaatay numberkii telefoonkeeda.
Kadibna waxa aan ku iri; "Taasi shaqadayda maaha ee adiga ayay kuu taallaa", kadib waxaan ku jaray teleefankii.
Waxaana ku iri; "Adiga ayay tallo gacantaada ku jirtaa".
Aiguna waxaan ku iri; "Maadaama aad ku qanacsan tahay Allaha isku kiin barakeeyo", sidaasi ayaanu ku kala tagnay. Ninkii ayaa guursaday horey ayuuna u sii ka xeystay xaaskiisii.
Waxaanad niyaddada ku haysaa in qofka sida dhabta ah jacaylku qaba aanu sinaba kuugu soo bandhigi karin ragga iyo dumar kuu doonaba ha ahaadee waayo maahmaah english ah ayaa tidhaahda "True Lover Don't Say Love Each Other,But They Know They Do" oo ay macnaheedu tahay labada qof ee sida dhabta ah sku jeceli lagamaba yaabo inuu ku yidhaado waan ku jecelahay midba midka kale balse wey ogyihiin waxaa ka dhexeeya waxanay isku dareensiiyaan waa ficilo aad ka garan karto qofka sida dhabta ah kuu jecel (action).
Waxa kale oo jira dhaqamo iyo caadooyin u fasaxaya gabadha in ay ku dhiirato sidii ay ugu soo bandhigi lahayd, Tusaale ahaan gabdhaha ku nool qurbaha oo kale ceeb kuma ah in ay tidhaahdo "Hebeloow waan ku jecelahay". Sidaa daraadeed ragga way ku adagtahay in ay ogaadaana gabadha aadka u jecel, maxaa yeelay dumarku uma qirtaan jacaylku sida uu yahay, xitaa haddii uu ka dhab yahay. Sidaa awgeed waxa jira waxyaabo badan oo uu ninku si fudud uga fahmi karo gabadha aadka u jecel waxeyna kala yihiin qodobadaasi.
Haddii gabadha ku jecel aad ku aragto hinaase waxa lagu sifeeyaa aragtida noocaasi ah in ay ku jeceshahay, maxaa yeelay hinaasaha laftiisu waxaa uu qayb laxaad leh ka qaadtaa jacaylka dhabta ah ee ay hayso haweeneydaasi. Gabadha ku jecel ee aan kuu soo bandhigin jacaylkeeda waxa ku abuurma dareen baqdin leh, waxaanay had iyo jeer ka werwertaa in ay waydo ninka ay jeceshahay oo uu raaco gabadh kale oo aan iyada ahayn. Hadaba haddii aad ka dareento gabadha aad wada sheekeysataan amaba walaltinimo idinka dhexeyso hadii aad ku aragto astaamahan waxa lagaaga baahan yahay in aanad lumin jaaniskaasi oo aanad dayacin jacaylkeeda ee aad ka faa'iidaysato fursada qaaliga ah. Astaamahan aad aragtay Run ahaantii waxa aad si fudud u soo jiidan kartaa una ogaan kartaa, kasban kartaana qalbiga gabadha ku jecel.